Bogga ugu weyn Sidee Loo Bixiyaa Realtors 2022? Khiyaamada Maalgashiga
Hantiilayaal ma sameeyaan lacag aad u badan? Imisa ayay qaataan? Arintan ayaa dad badan ay waydiiyeen waxaanan u joognaa in aan taas ka jawaabno.
Dadka qaarkiis, noqoshada hanti-dhawre waa shaqo riyo ah, shaqo rajo leh, iyo mid ku faraxsan taas. Inta badan dadka, hantiilayaasha waxaa loo arkaa hal shay iyo hal shay oo kaliya - dhexdhexaadiyeyaasha u dhexeeya iibsadayaasha iyo iibiyaha hantida ma-guurtada ah.
Labadaas qaybood ee dadka ayaa loo baahan yahay si loo sameeyo heshiis, taas oo ah, labadaba mulkiilaha iyo dadweynaha iibsadaha ama iibiyeyaasha doonaya iyo kuwa iibsanaya.
Nala joog markaan baarayno nolosha mulkiilayaasha oo aan hubinno sida ay u helaan mushahar.
Waa kuma Realtor?
Waa maxay faraqa u dhexeeya Wakiilka Guryaha, Hantiilaha, iyo Dallaalka
Waa maxay Sharaxaada Shaqada Realtor?
Sidee Loo Bixiyaa Hanti-Guuryaasha?
Guddiga Hanti-dhawrka ayaa Sharaxay
Isku soo wada duuboo, waxaa jira;
Imisa ayaa la bixiyaa Wakiilada Guryaha?
Maxay tahay sababta aad u noqon lahayd hanti-yaqaan?
Su'aalaha la isweyddiiyo ee sidee Realtors-ka loo bixiyaa 2022? Khiyaamada Maalgashiga
Ma bixisaa wakiilka guryaha haddii aad tahay iibsade?
Mulkiileyaasha ma helaan mushahar saacaddii?
Immisa boqolkiiba komishanka ah ayaa hantiilayaal heli doona iibka guriga kadib?
Wakiilada guryaha ma helaan mushaar aad u wanaagsan?
Haddii aad rabto inaad iibsato, iibiso, kireysato, ama guri kiraysatoy, waxay u badantahay in aad la xiriirto hanti-yaqaan. Hantiilaha waa wakiilka hantida ma-guurtada ah ee kaa caawinaya habka iibsashada ama iibinta guri.
Sida laga soo xigtay realtor.com, hantiilaha waa iibiye hanti maguurto ah kaas oo shati ka haysta Ururka Qaranka ee Realtors. Hantiilayaasha waa dadka u dhaqma sidii dhexdhexaadiyayaal u dhexeeya iibsadayaasha guri.
Waxay dhexdhexaadin karaan wax kala iibsiga xaaladaha kiraynta, kiraynta, iyo iibinta. Milkiilayaasha guryaha waxaa mararka qaarkood loogu yeeraa wakiilada guryaha.
Dadka qaarkiis xitaa waxay adeegsadaan ereyada wakiilka guryaha ijaarka, hantiilaha, iyo dilaaliyaha hantida ma-guurtada ah si isweydaar ah.
Sababtoo ah isfaham la'aanta guud ee doorka wakiilka hantida maguurtada ah, dullaal, ama hantiilaha, waxaa muhiim ah in la sheego farqiga u dhexeeya shaqada.
Suurtagalnimada in aad si xun u isticmaashay shuruudahan marka aad iibsanayso guri ama aad raadinayso mid ka mid ah xirfadlayaashan si ay kaaga caawiyaan iibinta waa sarraysaa. Si kastaba ha ahaatee, waxaad la kulmi doontaa mid iyaga ka mid ah markaad qorsheyneyso inaad iibsato ama iibiso guri.
Markaa maxaad u baran wayday shaqada runta ah iyo sifooyinka kala duwan.
Marka hore, wakiilka hantida ma-guurtada ah sida caadiga ah waxa uu leeyahay shati xirfadeed si uu u caawiyo qof kasta oo raba inuu iibsado, iibiyo, oo kiraysto hanti ma-guurto ah. Waxay dhexdhexaadiyaan habka. Wakiilada hantida ma-guurtada ah waxay ka kooban yihiin shirkado dillaalin hantida ma-guurtada ah iyo hantiileyaal gaar ah.
Marka labaad, dallaaliyaha hantida ma-guurtada ah waa shirkad wakaalad oo dhammaysatay shati dheeraad ah. Waxay inta badan shaqaaleysiinayaan wakiillada kale ee guryaha ama hantiilayaasha. Waxa laga yaabaa in ay tababaro dheeraad ah siiyaan hantiilayaasha ay u shaqeeyaan ama wakiillada la shaqeeya.
XIDHIIDHKA: Waa Kuwee Kalkaaliyaasha Kalkaalisada Maskaxda Ee Ugu Mushaarka Badan? | Dawladaha ugu sarreeya 2022 -ka
Seddexaad, hantiilaha waa wakiilka hantida ma-guurtada ah ama dallaalka kaas oo ka tirsan Ururka Qaran ee Realtors (NAR). Milkiilayaasha guryaha waxaa looga baahan yahay inay raacaan xeerka anshaxa ee ay dejisay NAR.
Iyadoo badi wakiilada guryaha ay yihiin kuwa iskood u shaqaysta guud ahaan iibiyeyaasha, waxay ka hoos shaqeeyaan shatiga dilaaliinta ama ururadooda.
Dadka intiisa badan ayaa xiisaynaya oo kaliya ku raaxaysiga adeegyada hantiilaha ay bixiyaan markay guri raadinayaan ama qorsheynayaan inay mid iibiyaan.
Dhanka kale, waxaa laga yaabaa inaad ka mid noqoto kuwa laga tirada badan yahay ee gaarka ah ee danaynaya inay noqdaan hanti-yaqaan.
Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad tan u raadsato xirfad shakhsi ahaaneed ama aad bilowdo wakaalad ama shirkad dillaaleed. Sidaa darteed, waa maxay dariiqa kale ee lagu bilaabi karo waxbarashada oo aan ahayn inaad fikrad ka haysato doorarka shaqada ee dhabta ah.
Hoos waxaa ah 5 sharraxaad oo ku saabsan shaqada mulkiilaha ama wakiilka guryaha.
Helitaanka macaamiil diyaar u ah oo awood u leh inay iibsadaan iyo/ama iibiyaan guri
Matalaadda iyo ku xidhidhiyaha macmiilka cusub dilaaliinta liiska
Sharaxaada iyo hagida iibsadaha ama iibiyeyaasha habka iibsiga guriga ama iibinta guriga siday u kala horreeyaan.
U kaxaynta macaamiisha safarrada guriga iyo kormeerka
Samaynta dukumeenti iyo shahaadooyin marka aad la falgalayso qareennada macaamiisha
Hadda oo aad ogtahay faraqa yar ee u dhexeeya 3-da shaqo iyo sharraxaadda shaqada ee dhabta ah, hadda waa waqtigii la tixgelin lahaa su'aalo fudud oo fudud; sidee loo qaataa hantiilayaasha?
Wakiilada guryaha ma helaan lacag? Intee in le'eg ayay sameeyaan mulkiilayaasha ama wakiilada guryaha sannadkii?
Akhri: 10-ka Shaqo ee ugu Fiican ee Maalgelinta Hantida Ma-guurtada ah (REITS)
Milkiilayaasha guryaha iyo wakiilada guryaha, guud ahaan, waxay ku helaan mushahar ku salaysan komishanka. Inta badan, inta badan waa 5 ilaa 6 boqolkiiba qiimaha iibka guriga kaas oo u kala qaybsan dullaal liiska iyo wakiilka iibsadaha.
Kharashka hantiilaha haddii kale loo yaqaan khidmadda wakiilka waxa caadi ahaan laga bixiyaa waxa iibiyuhu sameeyo. Maadaama wakiilka iibsadaha ama hantiilaha ama wakaaladu ay matalaan danaha iibsadaha oo ay haddana ku xidhaan dilaaliyaha ama wakiilka iibiyaha, 5-6% dakhligiisa ka soo baxa iibka ayaa la siinayaa komishan.
Komishanku waxa lasiiyaa wakiilada ha ahaato wakaalad dillaal ah ama hantiile halka iibsadayaashu guud ahaan aanay waxba siinin wakiilka. Hadda waxa ay noqotay naadir in la helo wakiillada guryaha oo ku weydiiya lacag fidsan ama lacag bixin iyadoo lagu salaynayo qiimaha saacaddii la shaqeeyay.
Fikradda ah in lacag lagu bixiyo ku saleysan komishanka waa fikrad da' weyn. Milkiilayaasha komishanku waxay ka helaan wakiillada iibsadayaashooda iyo samaynta iibka way kala duwanaan kartaa iyadoo ku xidhan qiimaha hantida.
XIDHIIDHKA: 7 Siyaabood oo Lacag Loogu Sameeyo Hay'ad aan faa'iido doon ahayn 2022
Waxaad si fiican u fahmi kartaa sida ay u shaqeeyaan komishannada hantida maguurtada ah ee cutubyada soo socda.
Iibiyaha doonaya wuxuu saxeexaa heshiis liis gareyn ah oo siinaya hantiilaha komishanka 5-6% iibka guri kasta. Heshiiskani waxa kale oo laga yaabaa inuu ka koobnaado waajibaadka liisku leeyahay ama hantiilaha waa inuu fuliyo kuwaas oo xaqiiqdii ay ku jiraan xayeysiinta hantida, iwm. isagoo ka wakiil ah iibiyaha.
Komishanka 6% waxa ay u kala qaybsan yihiin hantiilayaasha iyo dilaaliinta dhinac kasta (ie iibsadaha iyo iibiyaha), sida caadiga ah 50-50% ku salaysan heshiiska taagan.
Taas ka dib, sawiro tayo leh oo guriga ah ayaa la qaadayaa waxaana la qoraa sharaxaadda hantida. Intaa ka dib waxa lagu shubaa onlaynka Adeegga Liistada Badan (MLS). Shirkadda MLS waxay ku qori doontaa guriga labadaba suuqooda iyo mareegaha kale ee wakaalada ee gobol cayiman.
Marka uu wakhtigu dhaafo, macaamiisha muujiya xiisaha guriga waxa la tusi doonaa tafaasiisha guriga ku qoran iyo xataa jadwal booqasho jireed oo goobta ah wakiilka iibsadaha.
Haddi habka gadashada gurigu uu sii socdo waxa la soo bandhigaa iyada oo loo marayo warqad ujeedo ah ama foom caadi ah oo loo yaqaan heshiiska iibka guryaha. Caadi ahaan, ka dib dhawr gorgortan oo dhex mara wakiilka iibsadaha iyo wakiilka iibiyaha ama dilaaliinta liiska, heshiis ayaa laga yaabaa in la galo.
Iyadoo loo maleynayo in labada dhinac ay ku heshiiyaan oo kormeerka ugu dambeeya ay wanaagsan yihiin, ka dibna waraaqaha ayaa la diyaariyaa oo foomka heshiiska waxaa la saxiixaa iyadoo ay taageerayaan qareennada. Heshiiska hantida ma-guurtada ah wuxuu hadda u gudbi doonaa marxaladda xiritaanka.
Inta lagu jiro xidhitaanka, iibsaduhu wuxuu ku bixinayaa deebaaji lacag dhab ah ama hoos u dhigista koontada shirkadda escrow - qolo saddexaad oo dhexdhexaad ah - kaas oo gacanta ku haya dhammaan lacagta lagu bixiyay.
Habka iibsashada caadiga ah ee guriga, tani waxay labada dhinacba ka ilaalinaysaa khilaaf dhaqaale iyo khiyaamo suurtagal ah. Kharashka liiska ama guddiga wakiillada ayaa laga jarayaa kharashka guriga la iibiyay, ka dibna inta soo hartay waxaa la siinayaa shirkadaha ay wakiilka iibiyuhu u shaqeeyaan.
Iibiyaha wax ku iibiya isagoo gacan ka helaya dilaal Liistaha (wakiilka hantida maguurtada ah) kaas oo taxaya guriga suuqa hantida.
Iibsadaha iyo wakiilkiisa, wakiilka Iibsadaha ee u duceeya iibsadaha oo ka qaata komishanka liiska dullaaliinta.
Mar haddii hantida la iibiyo Dilaaliinta iyo wakiillada dhinac walba ( kan Iibka iyo Iibiyaha ah) waxay u kala qaybiyeen guddidii lagu heshiiyey.
Akhri: Waa maxay Maalgelinta Hantida Ma-guurtada ee Jajabka ah oo ay shaqeysaa?
Sida laga soo xigtay Glassdoor, celceliska mushaharka qaranka ee wakiilka guryaha waa $67,962 sanadkii gudaha Maraykanka. Xusuusnow in tiradani ay tahay celceliska mushaharka la qiyaasay ee tirakoobka ee Maraykanka.
XIDHIIDHKA: 20 Shaqooyin oo Bixiya $ 30 Saacad 2022 | Lacag Caddaan ah
Way ku kala duwanaan kartaa dal ilaa wadan wayna ku kala duwanaan kartaa xataa gobolada kala duwan ee Maraykanka.
Magaalooyinka aadka loo raadsado sida California, Los Angeles, iyo wixii la mid ah waxay siin doonaan dullaaliinta guryaha iyo hantiilayaasha lacag badan.
Glassdoor waxa uu sheegay in qiyaasta mushaharku ay ku salaysan tahay natiijada 2,331 ay si qarsoodi ah u soo gudbiyeen hantiilayaasha Maraykanka oo dhan.
Su'aashaasi dhab ahaantii waxay ku xidhan tahay adiga iyo doorashadaada shaqo. Shaqada hantiilaha waa wakiilka iibsadaha, wakiilka iibiyaha ama wakiillada labadaba ma fududa. Milkiilayaasha guryaha qaarkood waxay shaqeeyaan 40 saacadood todobaadkii halka kuwa kalena ay shaqeeyaan wax ka yar taas iyadoo ku xidhan heerka ballanqaadyada uu qofku ku jiro.
Qaybta ugu adag ee shaqadu waa helida macaamiil iyo faafinta warka ku saabsan liisaska cusub ee dadka lala xidhiidhayo iyo hogaanka cusub. Si kastaba ha noqotee, haddii aad leedahay rabitaan xoog leh oo aad ku caawineyso dadka inay helaan oo ay helaan gurigooda riyooyinka, ka dib noqoshada hanti-yaqaan waxay noqon kartaa shaqo fiican adiga.
Si hubaal ah, waa xirfad madadaalo leh oo faa'iido leh oo leh masuuliyado badan. Waa inaad ogaataa in hantiilayaasha ay sameeyaan kharashaadyo wax ku cuna faa'iidadooda soo jiidashada leh.
Suuqgeynta iyo isku xirnaanta waa hal shay oo ay ku dadaalaan wakiilada guryaha si ay ugu wanaajiyaan ganacsiga.
Ugu dambeyntii, ka digtoonow wakiillada laba-geesoodka ah sababtoo ah waxay ku shaqeeyaan iskahorimaadka danaha sababtoo ah waxay matali karaan labada dhinac ee heshiiska oo ay burburiyaan xiriirka.
Akhri: 13 Siyaabood oo Lacag looga Sameeyo Hantida Ma guurtada ah iyada oo aan lacag la hayn 2022
Horta uma iman oo ma bixinaysid wakiilka(yada) ku lug leh iibsashada guri. Lacagta iyaga ku baxda waxay ku qoran tahay qiimaha kharashka oo ay wadaagaan boqolkiiba wakiilada iyo dilaaliinta ay matalaan.
Ma jiro hantiileyaal wax mushahar ah ku qaata komishanka, sidaas darteed, waa dhaqan hore in la arko wakiilada guryaha oo la bixiyo saacadiiba.
sida caadiga ah qiyaastii boqolkiiba lix ee qiimaha qiimaha oo markii dambe loo kala qaybiyaa kala badh ie 3% inta u dhaxaysa iibsadaha iyo iibiyaha wakiilada ama dilaaliinta.
Waxay inta badan ku xiran tahay nooca guryaha la iibinayo iyo qiimahooda. Guryaha raaxaysiga ah iyo wakiilada hantida ma-guurtada ah ee ganacsigu waxa hubaal ah in ay heli doonaan lacag ka saraysa marka loo eego wakiilada qabanaya guryaha hal qoys ama kiraynta.
Sida Loo Bilaabo Ganacsi Guryo Ma-guurto ah 2022 | Hagaha Buuxa
Waa maxay sababta ay tahay inaad uga fiirsato Maalgelinta Guryaha Fog ee fog?
15-ka Magaalo ee ugu Wanaagsan Xeebta ee lagu Hawl-gab karo 2022
Sidee ayuu Zoom lacag u sameeyaa? Qaabka Ganacsiga Zoom
13 Shaqooyin Online Degdeg ah oo Fudud oo loogu talagalay Ardayda Kulliyadda 2022 -ka
Qaar ka mid ah shaqooyinka ugu fudud ee ardayda kulleejku waa kuwa aad ka samayn karto meel kasta. Hadday tahay…
Waa Kuwee 15 -ka Tuubbooyinka Ugu Mushaarka Badan Adduunka? | 2022 Dib u eegid
Subax aan biyo socda jirin, ama saxan go'an ama musqul xiran ayaa ah waxa kaliya ee ay qaadato in la xasuusiyo…
Guud ahaan 50-ka gobol ee Mareykanka, waxaa jira ilaa 800,000 oo qof oo u adeegaya sida saraakiil boolis. Kuwaas waxaa ka mid ah…